Wasiirka Dalxiiska Jamaica inay kaqayb gasho Shir Madaxeedka Soo kabashada Dalxiiska Afrika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Wasiirka Dalxiiska Jamaica inay kaqayb gasho Shir Madaxeedka Soo kabashada Dalxiiska Afrika
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dib-u-dhiska • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska Jamaica Mudane. Edmund Bartlett ayaa jasiiradda ka baxay maanta (13-kii July) si uu uga qayb-galo Shir-weynaha Dib-u-soo-kabashada Dalxiiska Afrika ee Wasiirrada Dalxiiska Afrika, oo lagu qaban doono Nairobi, Kenya, Jimcaha, July 16, 2021.
Shir-madaxeedka Dib-u-soo-kabashada Dalxiiska Afrika oo heerkiisu sareeyo ayaa daba socda Shirkii Dib-u-soo-kabashada Dalxiiska oo lagu qabtay Riyaad, Sacuudi Carabiya bishii May ee sannadkan.
Waxa diiradda la saari doonaa waayaha cusub ee dalxiisku hadda soo galayo oo sahamin doona siyaabaha dib loogu dhisi karo waaxda dalxiiska Afrika oo saamayn xun ku yeeshay COVID-19.
Wasiir Bartlett ayaa sii wadi doona wadahadalada maalgashi ee uu la leeyahay Wasiirka Dalxiiska ee Sacuudiga inta uu joogo Kenya.
Wasiir Bartlett ayaa lagu casuumay inuu ka hadlo shir-madaxeedka isaga oo ah hoggaamiye fikir caalami ah oo aad loo ixtiraamo adkeysiga dalxiiska iyo soo kabashada.
Inta uu joogo Kenya, Wasiir Bartlett wuxuu sii wadi doonaa wadahadalada maalgashi ee uu la leeyahay Mudane Ahmed Al Khateeb, Wasiirka Dalxiiska ee Sacuudi Carabiya, kaas oo si rasmi ah u biloowday bishii Juun markii Wasiir aan lahayn Portfolio ee Wasaaradda Kobaca Dhaqaalaha iyo Shaqo Abuurka, Senator Hon. Aubyn Hill, ayaa martigeliyay kii ugu horreeyay Jamaica-Sacuudi Carabiya shir laba geesood ah ayaa diiradda lagu saaray maalgashi gudaha ah si loo kobciyo kobaca dhaqaalaha iyo abuurista shaqooyin cusub oo maxalli ah.
Waqtigaas, Wasiir Al Khateeb wuxuu hoggaaminayay wafdi heer sare ah muddadii u dambeysay booqashada Jamaica, oo ay ka mid yihiin, Mudane Cabduraxmaan Bakir, Madaxweyne ku-xigeenka Soo jiidashada iyo Horumarinta Maalgashiga ee Wasaaradda Maalgashiga ee Sucuudiga, iyo Mudane Hammad Al-Balaawi, Maareeyaha Guud ee Maareynta Maalgashiga iyo Kormeerka ee Wasaaradda Dalxiiska Sucuudiga.
Kulankii June 24-keedii, ayuu Wasiir Hill ku muujiyey sida ay uga go’an tahay dowladda xoojinta xiriirka Jamaica-Saudi Arabia. Halka Wasiir Al Khateeb, oo ah guddoomiyaha Sanduuqa Horumarinta Sucuudiga ee awoodda badan ee balaayiin doolarka Maraykanka ah, uu muujiyey aragti ah in la sii ballaadhiyo hawlaha ganacsiga Sacuudi Carabiya ee Ameerika, gaar ahaan dhammaan gobollada Caribbean-ka iyo Laatiin Ameerika.
“Shir-madaxeedka heerka sare ah wuxuu daba socdaa shirkii dib-u-soo-kabashada Dalxiiska oo lagu qabtay Riyadh, Sacuudi Carabiya bishii May ee sannadkan. Waxay diiradda saari doontaa xilligan cusub ee waaxda dalxiiska ay hadda soo galayso waxayna sahamin doontaa qaabab dib loogu dhisayo waaxda dalxiiska Afrika oo ay saamayn xun ku yeelatay masiibada COVID-19, ”ayuu yiri Wasiir Bartlett.